Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay nin aan soo gaddiyay” | Somalilandhorta
Browse: Home / Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay nin aan soo gaddiyay”
Anigoo dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga kasoo hoos bixiyay nin aan soo gaddiyay”
Posted by Yasmin Ahmed on June 2, 2020 in Warar | Views | Leave a response
Ismahaan Imaan Maxamed, oo ah hooyo Axaddii ku dhaawacantay miino la qaraxday gaari ay dad rayid ah saarnaayeen ayaa BBC-da uga warrantay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha lixaadka leh ee soo gaaray qoyskeeda.
Lix ruux ayaa ku dhimatay halka toddobo kalena ay ku dhaawacmeen miinada waddada dhinaceeda la dhigay oo haleeshay gaariga ay la socdeen qoys ku sii jeeday tacsi ka dhacday deegaanka Daafeed ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Dadkii dhaawaca ahaa qaarkood, oo ay ku jirto hooyadan ayaa ku jira Isbitaalka Madiino ee magaalada Muqdisho.
‘Anigoo uu dhiig iga daadanayo ayaan wiilkeyga raadiyay’
Ismahaan ayaa sheegtay inay halkaas ku geeriyoodeen dhowr qof oo ay ka mid tahay hooyadeed.
“Markii aan gaarnay deegaanka Xaawo Cabdi ayuu mar qura nagu dhacay qaraxa, gaarigii oo dhan ayaa kor u kacay. Kaddib waxaa billowday raadintii dadka, anigoo uu dhiig iyaga daadanayo ayaan wiilkeyga raadinayay. Hooyadey meel ayey ku rafaneysay, gabar walaashey ah oo nala socotay meydkeeda ayaa meesha yaallay, abtigey meesha ayuu ku dhintay,” ayey tiri.
Image captionWiil 4 jir ah oo ay Ismahaan dhashay ayaa ku dhaawacmay qaraxa
Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayey sheegtay in markii ay xaaladdu halkaas mareysay ay dadaal u gashay sidii ay ku heli lahayd wiilkeeda oo 4 jir ah, oo markaas aysan indhaheeda qabanin.
“Wiilkeyga sidaan u raadinayay markii aan tabar dhigay ayaan kasoo hoos bixiyay nin tacbaan ah, ninkii ayaan iska gaddiyay halkaas ayaana cunuggeyga kasoo baxsaday.”
Markii dadkii dhaawaca ahaa la geeyay isbitaalka, waxaa durba halkaas ku geeriyooday Ismahaan hooyadeed iyo haweeney kale oo ay sheegtay inay habar yarteed ahayd.
Dadka ay waxyeellada gaartay ee gaariga saarnaa waxay u badnaayeen hal qos, oo dhammaantood isu baheystay inay u safraan tacsida.
“11 qof oo naga mid ah hal qoys ayaan ahayn, waxaa nala socday 3 ilaa 4 ruux oo markaas aan isbaranay,” ayey tiri.
Hadda, Ismahaan oo wali isbitaalka ku jirta waxay aad uga walwalsan tahay wiilkeeda yar, oo dhaawac culus uu kasoo gaaray qaraxa ka dhashay miinada gaarigooda la kacday.
“Wiilkeyga xaaladdiisa aad iyo aad ayey u liidataa, laakiin alxamdulillah, kolley ninkii nool waa la dugsanaa hadduuba caafimaad qabo. Laakiin waa ilmo wuu isku dardarsan yahay walina waxaa ku jirta cabsidii qaraxa uu ka qaaday – isagoo jiifa ayuu mar mar soo boodaa – hal lug kaligeed ayuu saddex meelood ka jabay lugta kalena hilib ayaa ka go’ay, madaxa xitaa qeyb ayaa ka maqan,” ayey tiri.
Image captionToddobo qof oo ku dhaawacmay qaraxaas ayaa la dhigay isbitaalka Madiina
Haweeney ay gaariga isku barteen Ismahaan ayaa isbitaalka taalla iyadoo dhaawac culus ka qabta madaxa. Sidoo kale waxay sheegtay inuu miyir beel ku jiro wiil uu dhalay abtigeed, oo ku dhintay dhacdadaas.
Ismahaan Imaan Maxamed ayaa noo sheegtay in xanuun aad u badan ay dareemeyso, laakiin waxay ku baaqday in laga waantoobo dhibaateynta dadka rayidka ah.
“Waxaan Alle ka baryenaa inuu Soomaalida xal u keeno. Waxyaabaha hadda dhaca ma aha si ay kusii socon karto. Xasuusteyda kama baxo qaraxaas, hurdadii way iga tagtay, sababtoo ah horay afka ayaan ka maqli jiray qaraxyada laakiin hadda waan la kulmay.”
Sida ay sheegtay Ismahaan, dadkii uu qaraxa dhibka ugu weyn kasoo gaaray waxay ahaayeen kuwii qeybaha hore ka saarnaa gaariga.
‘Waxaan u maleeyaa inaan wali meeshi ku dhex jiro’
Image captionDhaawacyada iyo meydadka ayaa la geeyay isbitaalka Madina
Hooyadan wuxuu dhaawac ka gaaray qeybta kore ee wajiga, waxaana nabarkii ku dhacay laga tolay dhowr qodob.
Hase yeeshee naxdintii ay qudheeda ka qaadday qaraxa ayey sheegtay inaysan wali ka harin.
“Dadka waxay u maleeyaan inaan hurdo laakiin anigoo soo jeedo ayaan sidii riyadii oo kale u xasuustaa wixii dhacay, waxaan u maleeyaa inaan wali ku dhex jiro meeshii uu qaraxa ka dhacay,” ayey tiri Ismahaan.
Illaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay masuuliyadda qaraxa, lamana oga cidda miinada ku aastay waddada uu gaarigaas kula kulmay.
Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo xoogagga Al-Shabaab ayaa ku sugan meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo ay mararka qaar dagaallo ku dhex maraan.
4 Saac ka hor La Wadaag Arag Fikradaha Print Shacabka wadanka Bosnia ayaa maanta xusaya sanad-guuradii 25-aad ee ka soo wareegtay xasuuqii Srebrenica, ee ay Seerbiyiintii Boosniya ku xasuuqeen in ka badan 8 kun oo isugu jiray rag iyo wiilal yar yar oo kasoo jeeday Muslimiinta Bosnia. Xasuuqaasi oo noqday kii ugu horreeyay ee ka dhaca Yurub, ka dib dagaalkii labaad ee dunida, ayaa xuska sanadkan loo ogolaaday in ay ka qeybgalaan dad aanan badneyn, sababo la xiriira ka hortaga faafiska coronavirus. Xasuuqa Muslimiinta Bosnia ayaa bilowday 11-kii July eesannadki 1995-kii, ka dib markii ay magaalada Srebrenica qabsadeen ciidamo iyo maleeshiyaad ka soo jeeday Seerbiyiinta Bosnia oo uu watay jeneraal Ratko Mladic. Mladic ayaa Boosniyiinta magaalada u sheegay in aysan baqin oo ay ammaan yihiin, xilli uu billaabay in uu dadka xasuuqo. Muddo 10 maalin ah ayay ku qaadatay in uu xasuuqo 8,000 oo Muslimiin ah oo ay ku jireen wiilal yaryar. Xuska maanta loo sameynayo dadkii la xasuuqay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha caalamka oo adeegsanaya muuqaalka tooska ah ee internet-ka. Waxaa madaxda hadashay ka mid ah Ra’isulwasaaraha Canada Justin Trudeau, Ra’isulwasaaraha Spain Pedro Sanchez, Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo Amiirka Britain Prince Charles.→
Xuska 25-guurada xasuuqii Muslimiinta Bosnia→